Zimbaboe: Andiana fakana an-keriny politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 5:44 GMT
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2008
Nalaina an-keriny tao an-tranony tamin'ny marainan'ny Alarobia 3 desambra 2008 i Jestina Mukoko, ilay mpanao gazety sady mpikatroka ho an'ny zon'olombelona. Araka ny tatitra maro avy amin'ny fiarahamonina sivily, isan'izay ny blaogy Kubatana, avoakana vondrona mpikatroka an-tambajotra [amin'ny teny anglisy avokoa ireo blaogy rehetra voatanisa]:
Tonga tao aminy ny andianà lehilahy farafahakeliny roa ambin'ny folo nandeha fiara roa nasiam-panovàna. Nalaina an-kerin izy. mbola nanao akanjo mandry, tsy nikiraro. 24 ora taorian'izay, mbola tsy misy vaovao momba an'i Jestina Mukoko na ny toerana mety hisy azy foana, na hoe iza no mety naka an-keriny azy.
Talen'ny Zimbabwe Peace Project [tetikasan'ny fandriampahalemana ao Zimbaboe (ZPP)] i Jestina Mukoko, fikambanana iray ao an-toerana izay miaro ny zon'olombelona ary maka sy manadihady ireo fandikana ny zon'olombelona ao Zimbaboe. Nanoratra ny This is Zimbabwen ilay blaogin'ny vondrona mpanohana ny hetsika sivika Sokwanele ao Zimbaboe [amin'ny teny anglisy] :
Fantatra tsara amin'ny toerana mahery fo misy azy ireo i Mukoko sy ny ZPP, misintona ny saina mankany amin'ny herisetra sy famonoana ireo mpanohana ny antoko MDC ataon”ireo milisin'ny Zanu PF, ary koa ataon'ny mpitandro filaminana avy amin'ny fanjakana, nandritra ny fampielezankevitra sy ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 27 jona.
Taorian'ny fakana an-keriny an'i Jestina Mukoko, nanomboka fampielezankevitra miantso ny Southern African Development Community (SADC) sy ny Firaisambe Afrikana (UA) ilay vondrona mpanohana ny hetsika sivika -Sokwanele- ao Zimbaboe mba hiditra an-tsehatra vonjimaika mba hanomezana antoka fa ho votsotra mialohan'ny hiatrehany fampijaliana maro hafa ireo mpikatroka ao amin'ny MDC sy i Jestina Mukoko. Manambara lisitrana hetsika ho atao mba hanampiana amin'ny famotsorana ireo olona rehetra nalaina an-keriny ilay fampielezankevitra : miantso ny biraon'ny polisy ao Norton (ny tanàna ipetrahan'i Jestin Mukoko), manoratra taratasy, manaparitaka ilay vaovao amin'ny endrika ‘widget’ manerana ireo blaogy sy tranonkala (etsy ambony). Notakian'ny Amnesty International ihany koa ny famotsorana avy hatrany an'i Jestina Mukoko, izay ny olona malaza indrindra nalaina an-keriny tao Zimbaboe hatramin'izay, amin'ny maha-filohan'ny Zimbabwe Peace Project azy .
Araka i Sokwanele, olona enina hafa no voasambotra tao Harare tamin'ilay andro nakana an-keriny i Jestina Mukoko:
Voasambotra androany tamin'ny 9h30 maraina ny sekretera jeneralin'ny sendikan'ny mpampianatra liam-pivoarana ao Zimbaboe (PTUZ) sy i Raymong Majongwe, mpanolotsaina jeneralin'ny kaongresin'ny sendikàn'i Zimbaboe (ZCTU), niaraka tamin'ny olona enina hafa koa, raha toa ka nandeha teo alohan'ny tranoben'ny Reserve Bank ao Zimbaboe (RBZ) [banky foibe] izy ireo, tamin'ny lalambe Samora Machel. Nolazain'ny vaolombelona iray nanatri-maso fa voadaroka sy voaroaka hiala ilay toerana ireo vehivavy maromaro tafaraka tamin'i Majongwe, tsy voafaritra ny isan-dy zareo ireo
[..] Tamin'ny 10h30, nosamborin'ny polisy mpandrava fikomiana i John Nyashanu, ilay mpanao gazetin'ny SABC sy mpitatitra taloha tao amin'ny ZBC, niaraka tamin'ny mpanao gazety roa hafa. Teo amin'ny sisin'ny làlana faharoa sy ny Union Avenua, tao afovoan'i Harare no nitrangan'ireo fisamboran ireo. Mbola tsy dia mazava tsara ny fomba nitrangan'ny fisamborana azy ireo.
Raha fintinina izany, zarain'i Sokwanele ao amin'ny pejin'ny fampielezan-kevitra Ajanony ny fakana an-keriny ao Zimbaboe ny lisitr'ireo olona 17 hafa izay efa nambara ny fakana an-keriny azy ary mbola tsy nahazoana vaovao foana hatramin'izao
1. i Concillia Chinanzvavana, filoham-paritra ao amin'ny Fikambanan'ny vehivavy ao amin'ny MDC an'ny Mashonaland West, kandidà parlemantera taloha ho an'ny Zvimba South ary mpikambana ao amin'ny Mpanolotsaina Nasionalin'ny MDC.
2. Ny vadiny, Emmanuel Chinanzvana, mpanolotsaina monisipaly ao amin'ny Zvimba South.
3. Fidelis Chiramba, tomponandraikitra distrika ao amin'ny Zvimba South, izay nirotsaka ho kandidà senatorialy MDC ho an'ny Zvimba nandritra ny fifidianana tamin'ny 29 Martsa.
4. Ernest Mudimu, kandidà parlemanteran'ny MDC ho an'ny Zvimba North tamin'ny fifidianana ny 29 Martsa.
5. Fanwell Tembo, mpikarakara ny tanora MDC ho an'ny Zvimba South.
6. Terry Musona, sekretera lefitra provinsialin'ny MDC.
7. Lloyd Tarumbwa, mpikatroka ao amin'ny MDC.
8. Violet Mupfuranhehwe, vadin'ny filohan'ny tanora MDC an'ny Zvimba South.
9. Collen Mutemagawo, filohan'ny tanora MDC ao amin'ny Zvimba South.
10. Zaza roa taona, an'i Mupfuranhehwe sy Mutemagawo.
11. Pieat Kaseke, mpikatroka ao amin'ny MDC.
12. Gwenzi Kahiya, mpikatroka ao amin'ny MDC.
13. Tawanda Bvumo, mpikatroka ao amin'ny MDC an'i Chitungwiza.
14. Agrippa Kakonda, mpikatroka ao amin'ny MDC.
15. Larry Gaka, mpikatroka ao amin'ny MDC.
16. Chris Dlamini, mpikatroka ao amin'ny MDC.
Fanaovazana tamin'ny 8 desambra tolakandro: araka i Sokwanele, olona roa hafa avy ao amin'ny Zimbabwe Peace Project no voasambotra androany :
151 ora taorian'ny fakana an-keriny ny filohan'ny Zimbabwe Peace Project, Jestina Mukoko, tao an-tranony tao Norton, olona enina hafa izay heverina ho polisy no tonga nisambotra olona roa mpiasan'ny ZPP, i Broderick Takawira (mpandrindram-paritra) ary i Pascal Gonzo (mpamily) tao amin'ny biraony ao Mount Pleasant. Araka ireo vavolombelona nanatrika, niditra an-tery tao amin'ny biraon'ny ZPP ireo mpitandro filaminana enina, nanizingizina ny hihaona amin'i Takawiri, izay notereny, niaraka tamin'i Gonzo, hanaraka azy ireo ao anaty fiara izay efa niandry teo ary niainga haingana.